လိမ္မာပါးနပ်စွာ - LinkedIn အရောင်း Navigator နှင့်အတူ B2B ထပ်မံမောင်းနှင်နည်း Martech Zone
LinkedIn သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ B2B ပညာရှင်များအတွက်ထိပ်တန်းလူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအကြောင်းအရာဖြန့်ဝေရန်နှင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် B2B စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ LinkedIn တွင်ယခုအခါအသင်း ၀ င်ဘီလီယံဝက်ခန့်ရှိပြီးအကြီးတန်းအဆင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသန်း ၆၀ ကျော်ရှိသည်။ သင်၏နောက်ဖောက်သည်သည် LinkedIn တွင်ရှိနေသည်မှာသံသယဖြစ်စရာမလိုတော့ပါ။ ၎င်းတို့သည်သင်မည်သို့ရှာတွေ့သည်၊ သူတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ၊ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်သူတို့တန်ဖိုးကိုသိနိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်အလုံအလောက်ပေးသည်။
မြင့်မားသောလူမှုကွန်ယက်လှုပ်ရှားမှုရှိသောအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်ရောင်းအားအခွင့်အလမ်း ၄၅% ပိုမိုရရှိပြီး ၅၁% သည်၎င်းတို့၏ရောင်းအားခွဲတမ်းကိုပိုမိုရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုနာမည်မပေးခဲ့တာကိုသတိပြုမိပါသလား LinkedIn တို့? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ LinkedIn ရဲ့ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ပါ အရောင်းပညာရှင် နောက်လာမည့်အလားအလာများကိုသုတေသနပြုရန်နှင့်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်အတွက်ပလက်ဖောင်းကိုအပြည့်အဝအသုံးချရန်။ သင်၏လစဉ်စာတိုမည်မျှပို့သည်၊ သင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည့်အရေအတွက်မည်မျှရှိသည်၊ သင်၏ပရိုဖိုင်အားမည်သူကြည့်ရှုသည်ကိုသင်မသတ်မှတ်နိုင်ပါ၊ ရှာဖွေနိုင်သည့်ဒြပ်စင်တိုင်းကိုကြည့်။ မရပါ၊ ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိပါ သင့်ရဲ့ချက်ချင်းကွန်ယက်ကိုပြင်ပအလားအလာရန်။
အဆင့် ၁ - LinkedIn အရောင်း Navigator အတွက်စာရင်းသွင်းပါ
LinkedIn အရောင်း Navigator အရောင်းကျွမ်းကျင်သူများသည်မှန်ကန်သောအလားအလာများနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများအတွက် ၀ င်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်မှန်ကန်သောလူများနှင့်ကုမ္ပဏီများကိုပစ်မှတ်ထားရန်ကူညီသည်။ LinkedIn Sales Navigator နှင့်အတူအရောင်းပညာရှင်များသည်ပိုမိုထိရောက်သောအရောင်းအ ၀ ယ်အတွက်အရောင်းအဝယ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ပြီး၊ သင်၏အကောင့်များနှင့် ဦး ဆောင်မှုများအကြောင်းနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများရရှိရန်နှင့်အအေးခေါ်ဆိုမှုကိုနွေးထွေးသောစကားပြောဆိုမှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ပလက်ဖောင်း၏အင်္ဂါရပ်များမှာ
အဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင်နှင့်ကုမ္ပဏီရှာဖွေမှု - လုပ်သက်၊ ရာထူး၊ ကုမ္ပဏီအရွယ်၊ ပထဝီဝင်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်အပိုဆောင်းနယ်ပယ်များပါ ၀ င်သည့်ကုမ္ပဏီများကို ဦး တည်ပါ။
ခဲအကြံပြုချက်များ - Sales Navigator သည်ကုမ္ပဏီတခုတည်းတွင်အလားတူဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများကိုအကြံပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် desktop, mobile, email စသည့်ခေါင်းစဉ်များကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။
CRM ထပ်တူပြုခြင်း - အလိုအလျောက်လူကြိုက်များသော၊ သိမ်းဆည်းထားသောအကောင့်များနှင့်သင်၏ပိုက်လိုင်းမှသင်၏ CRM သို့ပို့ဆောင်ခြင်းများကိုနေ့စဉ်ရယူပါ။
Sales Navigator ဖြင့်သင်ဆက်သွယ်မှုများနှင့်တည်ရှိနေသောဆက်နွယ်မှုများကိုလွယ်လွယ်ကူကူမှတ်မိနိုင်ပြီးအဆက်အသွယ်များနှင့်အကောင့်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးပေါ်ရှိနေပြီးအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည့်ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
LinkedIn အရောင်း Navigator ကိုအခမဲ့စမ်းကြည့်ပါ
အဆင့် ၂ - သင်၏ Prospect List ကိုရေးပြီး Cold Copy ရေးပါ
LinkedIn တွင်ကျွန်ုပ်တို့တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်ဆက်သွယ်သောအခါအလွန်အသုံးများသောဝေါဟာရတစ်ခုရှိသည်။ အချစ်ဇာတ်လမ်း။ ဒီဝေါဟာရကိုဘယ်သူဖော်ထုတ်ခဲ့သလဲဆိုတာမသေချာပေမဲ့လုံးဝပစ်မှတ်ထားပြီးပြီ။ ခင်ဗျားရဲ့အိမ်ရှေ့တံခါးဖွင့်လိုက်တာနဲ့အရောင်းဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကတံခါးကိုချက်ချင်းခုန်ပြီးမင်းကိုရောင်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ ငါ "ကြိုးစား" ဟုဆိုသည်။ လူမှုရေးအရောင်းအ ၀ ယ်သည်အစေးနှင့်ဘာမျှမဆိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်တန်ဖိုးကိုပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
Cleverly မှအဖွဲ့သည်အဖြေများရရှိသောအအေးစာရွက်စာတမ်းများရေးသားရာတွင်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်။ ဒီအမှားသုံးခုကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အကြံပေးသည် -
မသေချာဘူး စက်မှုလုပ်ငန်းပျော့ပျောင်းသောစကားလုံးများကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးသတ်သတ်မှတ်မှတ်နယ်ပယ်တစ်ခုကိုပြောဆိုပါ၊ သို့မှသာသင်အမှန်တကယ်အသုံးပြုသောအတွင်းသုံးဘာသာစကားအသုံးပြုမှုကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ အလွန်သေးငယ်သောနှိမ့်ခြင်းကတုံ့ပြန်မှုနှုန်းကိုမြင့်တက်စေသည်။
တိုတိုကိုသုံးပါစာကြောင်း ၅-၆ ကျော်အထက်မှာရှိသောအရာများသည်အထူးသဖြင့်မိုဘိုင်းပေါ်တွင်ကြည့်ရှုသည့်အခါ LinkedIn အပေါ်အကာအကွယ်ယူလေ့ရှိသည်။ သင်၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖောက်သည်ကိုစကားလုံးနည်းနည်းဖြင့်သူတို့၏ဘဝကိုမည်သို့တိုးတက်စေနိုင်သည်ကိုပြောပြပါ။ Cleverly ၏ထိပ်တန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောမက်ဆေ့ခ်ျများသည် ၁-၃ စာကြောင်းများဖြစ်သည်။
လူမှုအထောက်အထားပေးပါဖြေ - အလားအလာရဲ့ပထမဆုံးစိတ်ထားကမင်းကိုမယုံဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်ထင်ရှားတဲ့ဖောက်သည်တွေရဲ့နာမည်ကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ သင်ရရှိတဲ့ရလဒ်များကိုဖော်ပြခြင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများကိုညွှန်ပြခြင်းတို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။
သင်၏အလားအလာအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း၊ စကားပြောဆိုမှုနှင့်တန်ဖိုး - မောင်းနှင်သည့်မက်ဆေ့ခ်ျအစီအစဉ်များကိုပါးနပ်စွာရေးသားသည်။
အဆင့် ၃: အရှုံးမပေးပါနဲ့။
တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုသည်အလားအလာကိုကျော်လွှားရန်ထိတွေ့မှုများစွာလိုအပ်သည်။ သင်၏အလားအလာများမှာအလုပ်များနေပြီး၎င်းတို့တွင်ဘတ်ဂျက်မရရှိနိုင်သကဲ့သို့သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ ယ်ယူရန်ပင်စဉ်းစားနေမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၌တသမတ်တည်းကောင်းသောခရီးစဉ်နောက်ဆက်တွဲအစီအစဉ်ရှိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သင်နှင့်ဆက်သွယ်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အလားအလာသည် ၁- ဒီဂရီဆက်သွယ်မှုဖြစ်လာပြီးသင်၏ကွန်ယက်ထဲ၌အမြဲတမ်းရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုနောက်ဆက်တွဲအကြောင်းအရာများဖြင့်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည်။
နောက်ဆက်တွဲမက်ဆေ့ခ်ျများကို ၂-၅ မှပါးနပ်စွာဖြင့်အလားအလာများသို့ပေးပို့သည်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ ထိတွေ့မှု (၃) သည်မကြာခဏဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏ရလဒ်များကိုသက်သေပြသည်။
အဆင့် ၄ - မင်းရဲ့မျိုးဆက်ကိုလိမ္မာပါးနပ်စွာမြှင့်တင်ပါ
အကယ်၍ ၎င်းသည်စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသောအသံဖြစ်ပါကသင်အသုံးပြုခြင်းကိုဆက်လုပ်လိုပေမည် လိမ္မာပါးနပ်စွာ။။ လိမ္မာပါးနပ်စွာသင့်ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့နှင့်ပလက်ဖောင်းရှိပြီးသင့်ကိုယ်စားအလားအလာရှိသောသူနှင့် ဆက်သွယ်၍ သင်၏အရောင်းကိုယ်စားလှယ်၏စာတိုက်ပုံးထဲသို့၎င်းတို့ကိုပိတ်ပစ်ရန်၎င်းတို့ကိုတွန်းအားပေးသည်။ ဒါကသင့်အရောင်း ၀ န်ထမ်းတွေကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်။ ရောင်းတာပဲ။ ချန်ထားပါ လူမှုရေးအရောင်းအ လိမ္မာပါးနပ်စွာ
Cleverly dashboard သည်သင်၏ LinkedIn စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများ၏နောက်ဆုံးပေါ်လျှပ်တစ်ပြက်ဓာတ်ပုံပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာမက်ထရစ်၊ ဆက်သွယ်မှုနှုန်း၊ ပြန်ပေးသည့်နှုန်း၊ စုစုပေါင်းဖိတ်ကြားမှုအရေအတွက်နှင့်စုစုပေါင်းပြန်လည်ဖြေကြားမှုစသည်တို့ဖြစ်သည်။
Cleverly ၏ platform သည် LinkedIn နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးသင့်အားအလားအလာများကိုစီမံရန်၊ ခြေရာခံရန်နှင့်တုန့်ပြန်ရန်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းကိုပေးသည်။ သင့်အားနာရီပေါင်းများစွာတုံ့ပြန်မှုကိုသက်သာစေရန် click-and-templates အပါအ ၀ င်။
Cleverly ခလုတ်ခုံသည်ရောင်းအားသံသရာတွင်သင်၏အလားအလာများကိုခြေရာခံနိုင်ရန်အတွက် built-in LinkedIn CRM အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ သင်၏အရောင်းပိုက်လိုင်းကိုစည်းရုံးသိမ်းဆည်းရန် Campaigns, Tag၊ Response Sentiment, Snoozed သို့မဟုတ် Unread တို့မှမက်ဆေ့ခ်ျများကိုစစ်ထုတ်။ ပြန်ကြားချက်ကိုဘယ်တော့မှလက်လွတ်မခံပါ။
LinkedIn ၏အလားအလာတိုင်းနှင့်သင်၏ LinkedIn စကားပြောဆိုမှုသမိုင်းကြောင်းအတွက်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကို tab တစ်ခုထဲတွင်ကြည့်ပါ။ မည်သည့်အလားအလာရှိကြောင်းမှတ်စုများကိုယူပြီးပိုမိုလွယ်ကူသောအပိုင်းများနှင့်ရှာဖွေနိုင်မှုအတွက်စိတ်ကြိုက် tag များထည့်ပါ။ ထို့အပြင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမြင့်မားစေရန်အတွက်သင်၏တုန့်ပြန်ချက်များကိုနောင်အချိန်နှင့်နေ့စွဲတွင်ထွက်ရန်စီစဉ်ပါ။
LinkedIn ဆက်သွယ်မှုအသစ်များကိုအမည်၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၊ တံဆိပ်များ၊ တည်နေရာ၊ ရက်စွဲ၊ အီးမေးလ်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်များကိုစီစစ်ပါ။ အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုတင်ပို့ပြီးသင်၏ CRM တွင်ထည့်ရန်သင်၏သတ်မှတ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ connection list ကို download လုပ်ပါ။
Cleverly သည်သင်၏ LinkedIn ၏အဝေးရောက်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖန်တီးသော်လည်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတုံ့ပြန်ချက်အပေါ် အခြေခံ၍ အပြောင်းအလဲများနှင့်တိုးတက်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ပိုမိုနှစ်သက်ပါကသင်၏စာတိုပေးပို့မှုပြင်ဆင်မှုများအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ရယူရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
သင်၏မေးခွန်းများကိုဖြေ ဆို၍ dashboard ၏အင်္ဂါရပ်များကိုမည်သို့လေ့လာရမည်၊ အလားအလာပိုမိုများပြားလာရန်ထိပ်တန်းလုပ်ဆောင်မှုများမှထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရယူပါ။
သင့်လိပ်စာတွင် Connection Rate၊ Reply Rate၊ စုစုပေါင်းဖိတ်ကြားမှုအရေအတွက်နှင့်ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းများကဲ့သို့သောမက်ထရစ်များအပါအ ၀ င်သင်၏ LinkedIn လှုပ်ရှားမှုများ၏နောက်ဆုံးပေါ်လျှပ်တစ်ပြက်မှတ်တမ်းတင်ချက်တစ်ခုပါရှိသည်။ သင်၏ LinkedIn စာအ ၀ င်တွင်အပြုသဘောဆောင်သောပြန်ကြားချက်ကိုရတိုင်းအီးမေးလ်မှတဆင့်သင့်အားလိမ္မာပါးနပ်စွာလိမ္မာပါးနပ်စွာချက်ချင်းအသိပေးလိမ့်မည်။
ထုတ်ဖော်: ငါကတစ် ဦး Affiliate ပေါ့ LinkedIn အရောင်း Navigator နှင့် လိမ္မာပါးနပ်စွာ။.
Tags: b2bb2b ရှာဖွေရေးb2b လူမှုရေးရောင်းချမှုလိမ္မာပါးနပ်စွာအအေးရှာဖွေရေးရှာပါမေးလ်အကျဉ်းထောင်linkedinlinkedin ရောင်းအားရေကြောင်းပြရှာဖွေရေးလူမှုရေးအရောင်းအ